वाईफाई पासवर्ड दिएर फिल्म चल्ला ? – Mero Film
वाईफाई पासवर्ड दिएर फिल्म चल्ला ?
२०७५ साउन १० गते १५:१५
फिल्म लाइन हल्लाको लाइन हो भन्ने कुरामा त दुइमत रहेन । फन्टुस आइडियादेखि गम्भिर आइडिया यहीँका फिल्मीकर्मीमा फुर्छ । फिल्म कस्तो बनायो भन्ने त मतलब नै छैन । फिल्म चलाउन के गर्न सकिन्छ भनेर बढी सोच्छन् ।
भदौ २२ गतेबाट हलमा लाग्न लागेको रामकहानी फिल्मको फन्टुस आइडियालाई नै हेरौ न ।
निर्देशक सुदर्शन थापाले राजधानीमा नाम कमै सुनिएका रेष्टुरेन्टमा वाइफाइको नाम र पासवर्ड नै रामकहानी राख्ने बन्दोबस्त मिलाएछन् । भिडभाड हुने रेष्टुरेन्ट उनको लिष्टमा देखिएनन् । अब, दर्शकले पासवर्ड रामकहानी हालेर दंग पर्दै हलमा आउलान् त ?
प्रयोग त नयाँ गर्न पाइन्छ । तर, प्रयोग कहाँ गरियो भन्ने मुख्य हुन्छ । सुदर्शनको यो आइडिया नयाँ छ तर प्रभावकारी नहुन पनि सक्छ । फिल्ममा नै नभएको राम सिताको भेषको फोटोसुट पनि उनले नै गराएका छन् । फेरि नभएको नभएको आइडिया लगाउँदा दर्शक कन्फ्यूज भएर घरमै बस्लान् नी निर्देशक ज्यू !